R.W oo Talaabo Horumar leh ku tilmaamay Aqoonsiga Dowladda Mareykanka – Radio Daljir
Janaayo 19, 2013 7:58 b 0
Sabti, January 19, 2013—–Ra?iisal Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid), oo maanta shir jaraa’id ku qabtay Xafiiskiisa ayaa ka hadlay go?aanka Dowladda Mareykanka ee ahaa inay Aqoonsatay Dowladda Soomaaliyeed, wuxuuna ku tilmaamay go?aankaas talaabo Horumar leh dalka & dadka Soomaliyeedna dan u ah.
Ra?iisal Wasaare Saacid ayaa sheegay in aaney iska imaan aqoonsiga Dowladda Mareykanka balse ay ku timid Dhabar adeyg, Hufnaan iyo Midnimada Dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed, iyo sidoo kale Horumarada siyaasadeed ee ?ugu dambeeyey sida Doorashooyinkii Baarlamaanka, Madaxweyne Hassan Sheikh iyo soo dhisidii xukuumada kooban.
Ra?iisal Wasaaraha ayaa ugu baaqay Dowladdaha kale ee Caalamka inay ku daydaan talabaadan Dowladda Mareykanka ay ku aqoonsatay Dowladda Soomaaliyeed, isagoo u mahadceliyay Dowladihii iyo urur goboleedyadii horay u aqoonsaday
Ra?iisal Wasaare Saacid ayaa waxa uu isaga oo ka faa?iideysanaya fursadan Tacsi u diray Alle ha u naxariistee, Wariye Cabdi Xareed Cismaan Aadan oo taariikhdu markay aheyd 18-Janaayo 2013 ay kooxo hubeysani ku toogteen magaalada Muqdisho. Mudane Saacid wuxuu si gaar ah Tacsi ugu diray Qoyskiisa, Qaraabadiisa iyo Warbaahinta Shabelle oo uu ka howlgali jiray wariye Abdi Xareed.
R.wasaaraha ayaa xusay in dilka Wariye Xareed ay Laamaha ammaanku soo gaarsiiyeen warbixin kooban, balse uu ku wargeliyay in loo soo gudbiyo warbixin dhameystiran, si deg deg ahna looga howlgalo si talaabo looga qaado kooxihii gacan ku dhiiglayaasha ahaa ee geystay falkan,
Ra?iisal Wasaare Saacid ayaa sidoo kale ka hadlay xarigga wariye Cabdicasiis Cabdinuur Koronto oo todobaadkii labaad ku jira gacanta Dowladda, wuxuuna ku tilmaamay in arrintani uu aad isugu howlay sidii loo soo gabgabeyn lahaa, hay?addaha amniga iyo maxkamadana uu faray in si deg deg ah kiiskan loo soo afjaro, haddii uu dembi ku cadaado Weriyahana la waafajiyo sharciga, haddii uu ku cadaan waayona, sharciga lagu qaado. Wuxuuna ugu dambeyntii ku celiyay in Xukuumadu ay ilaalinayso Xorriyadda hadalka iyo mida saxaafada.
Bankiga Hormarinta Islaamka oo dawooyin ugu deeqay isbitaalka Bosaaso (Sawiro)